सिकिस्त बिरामीसँग फोटो सेशन, दुई प्याकेट जुस हस्तान्तरण ! – Sandesh Press
May 29, 2021 258
काठमाडौं : जताततै फोटो खिच्ने र सेल्फी लिने प्रचलनले आम मानिसमा मानवीयता सकिँदै गएको देखाएको छ। घा टदेखि अस्पतालसम्म, धर्मकर्मदेखि राहत वितरणसम्म फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने काममा राजनीतिक नेता, कार्यकर्तासमेत देखिन थालेका छन् ।
अस्पताल जस्तो जीवन र म’रणको दोसाँधमा उपचाररत अवस्थाका बिरामीलाई फुल्याउने नाममा दिइने केही प्याकेट चाउचाउ र जुस हस्तान्तरणको समेत फोटो सेशन गर्ने प्रवृतिले पीडित व्यक्ति र समूहलाई सहयोग भन्दा आहत बढी दिएको प्रष्ट हुन्छ। सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त यो तस्बिरमा पनि जनप्रतिनिधिले मरणासन्न अवस्थामा उपचाररत बिरामी र उनका आफन्तलाई अस्पतालको बेडमा पुगेर एक प्याकेट जुस हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ ।
यसबाट उनीहरुमा बि’रामीको चिन्ता भन्दा भोलिको निम्ति भोट बटुल्ने उद्देश्य निहीत रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थाको फोटो खिच्ने र सामाजिक सञ्जाल रंगाउने प्रवृत्तिलाई राहत वितरणको नाममा अमानवीयताको परा’काष्ठा हो भन्न सकिन्छ । युथ भ्वाईस नामक फेसबुक पेजमा सेयर गरेको यो तस्बिरमा २ ओटा जुस हस्तानान्तरण गरेको देखिन्छ काठमाडौं : जताततै फोटो खिच्ने र सेल्फी लिने प्रचलनले आम मानिसमा मानवीयता सकिँदै गएको देखाएको छ। घा टदेखि अस्पतालसम्म, धर्मकर्मदेखि राहत वितरणसम्म फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने काममा राजनीतिक नेता, कार्यकर्तासमेत देखिन थालेका छन् ।
यसबाट उनीहरुमा बि’रामीको चिन्ता भन्दा भोलिको निम्ति भोट बटुल्ने उद्देश्य निहीत रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थाको फोटो खिच्ने र सामाजिक सञ्जाल रंगाउने प्रवृत्तिलाई राहत वितरणको नाममा अमानवीयताको परा’काष्ठा हो भन्न सकिन्छ । युथ भ्वाईस नामक फेसबुक पेजमा सेयर गरेको यो तस्बिरमा २ ओटा जुस हस्तानान्तरण गरेको देखिन्छ
Prevआमा तिमीलाई खुसी दिन सकिँन भन्दै संक्रमित शिक्षिकाले बनाएको अन्तिम टिकटक भिडियो
Nextमनाङमा बाढी : ६ घर विस्थापित, चार टहरा र पक्की पुल बगायो, आवत जावत बन्द !
द भ्वाइस किड्स’की कोच प्रविशाको इन्गेजमेन्ट, मंसिर ५ गते बिहे
कट्रिनाले भनिन्- ‘विवाहको कुनै योजना छैन, बाहिर आएका सबै कुरा हल्ला हुन्’
काखी, घाँटी, कुइना कालो भएर लज्जीत हुनुहुन्छ ? अब यसो गर्नु होस्, पाउनुहुनेछ गोरोपना